नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि चाडबाडको अवसरमा अफरै अफर , काग तिहारको दिन कार्तिक २८ देखि मंसिर ५ गते सम्म निरन्तरता दिने
गोठालो खबर -३ २०७७ कात्तिक २८, शुक्रबार,०९:२०:AM
काठमाण्डौं, २८ कार्त्तिक। नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि तिहार, छठ र नेपाल सम्वत् को अबसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिभिन्न छुट, प्याकेज तथा अफरहरु उपलब्ध गराउने जनाएको छ । टेलिकमले दसैंको अवसरमा दिइएको छुटलाई समेत निरन्तरता दिने भएको हो । उक्त छुट तथा अफर प्याकेजहरु काग तिहार २०७७/०७/२८ गते बाट लागू हुने र मंसिर ५ गते सम्म निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि दशैँको अवसरमा उपलब्ध गराएको अफरहरुले निरन्तरता पाउने भएको छ। यस कम्पनीको जीएसएम सीडिएमए मोबाईल प्रयोगकर्ताहरुले रिचार्ज कार्डमा रु. ५० र एमपोसबाट २० देखि ५० सम्म रिचार्ज गर्दा सोहि दिनको लागि ५ मिनेटको बोनस प्राप्त हुने छ । रिचार्ज कार्डबाट रु. १०० र एमपोसबाट ५१ देखि १०० सम्म रिचार्ज गर्दा सोहि दिनको लागि १० मिनेट सम्मको बोनस प्राप्त हुने छ । रिचार्ज कार्डबाट रु. २०० र एमपोसबाट १०१ देखि २०० सम्म रिचार्ज गर्दा सोहि दिनको लागि २० मिनेट सम्मको बोनस प्राप्त हुने जनाएको छ ।
एमपोसबाट रु. २०१ देखि रु. ४९९ सम्मको व्यालेन्स रिचार्ज गर्दा ३० मिनेटको बोनस प्राप्त हुने र उक्त बोनस सोहि दिन सम्म मात्र प्रयोग गर्न पाईने जनाएको छ । त्यसैगरि रिचार्ज कार्डबाट रु. ५०० र एमपोसबाट रु. ५०० देखि रु. ९९९ सम्म रिचार्ज गर्दा दुईदिन सम्ममा प्रयोग गर्न सकिनेगरी ५० मिनेट सम्मको बोनस प्राप्त हुने छ । यदि रिचार्ज कार्डबाट रु. १००० र एमपोसबाट रु. १००० भन्दा माथि रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुले २ दिन भित्र प्रयोग गर्न सकिनेगरी १०० मिनेटको बोनस प्राप्त गर्ने जानएको छ ।
नेपाल टेलिकमले अटम अफर अन्तर्गत ७ सम्म प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रतिदिन १०० मिनेट र २८ दिनका लागि प्रतिदिन १०० मिनेट चलाउन मिल्ने छुट्टा-छुट्टै भ्वाइस प्याक दिने जनाएको छ, जसको मूल्य रु. ९५ मात्र रहेको छ भने २८ दिन सम्मको लागि रु. ३७५ मूल्य रहने गरि अफरहरु उपलब्ध गराउने भएको हो । यि प्याक अन्तर्गत क्रमशः ७०० मिनेट र २८०० मिनेट कुराकानी गर्न सकिने जनाएको छ ।
यस कम्पनीले चाडबाडलाई लक्षित गरि भ्वाइस र डाटा प्याक दुबै सुबिधा सहितको नयाँ इको प्याक उपलब्ध गराएको छ । यस अफर अन्तर्गत प्रतिदिन १४ मिनेट कुराकानी गर्ने र प्रतिदिन १ जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने गरि ७ दिनका लागि रु. ९५ मूल्यमा ९८ मिनेट भ्वाइस कल र ७ जीबी डाटा चलाउन मिल्ने गरि यो सुबिधा उपलब्ध गराएको हो । यसैगरि, नेपाल टेलिकमले यसै योजना अन्तर्गत रु. ३७५ मा २८ दिन सम्म प्रयोग गर्न सकिने गरि ३९२ मिनेटको भ्वाइस कल र २८ जीबी डाटा सहितको प्याकेज उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले चाडबाडको अवसरमा फेसबुक र युट्युब चलाउनको लागि लार्ज सोसल मिडिया प्याकमा विशेष छुट ल्यएको छ । यस कम्पनीले फेसबुक र युट्युब चलाउदा रु. १८० मा अल डाटा ४ जीबी र प्रत्येक दिन १ जीबी फेसबुक तथा युट्युब चलाउन ७ जीबी सिहित ११ जीबी डाटा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसैगरि रु. ५९९ मा अल डाटा प्याक १० जीबी र २८ दिनसम्म प्रत्येक दिन १ जीबी गरि फेसबुक तथा युट्यब चलाउनको लागि २८ जीबी सहित ३८ जीबी डाटा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पोस्टपेड प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुको लागि यस कम्पनीले पहिले देखि नै उपलब्ध गराउदै आएको पोस्टपेड प्याकमा रु. ५९९ को नयाँ पोस्टपेड प्याक थप गरेको छ भने रु ७४९ को प्याक डाटा भोल्युममा केहि हेरफेर गरेको छ । परिमार्जन गरिए संगै अब भने ग्राहकहरुले रु. ५९९ मा ३० दिनसम्म चलाउन मिल्ने गरि प्याक लिन सकिने छ ।
उक्त प्याकको सुबिधा लिदा ४०० मिनेट टेलिकमको नेटवर्कभित्र र ५० मिनेट अन्य नेटवर्कमा समेत कल गर्न सकिने जनाएको छ । यसैगरि रु. ७४९ को ३० दिनको लागि प्याक लिन सकिने छ, यस बाट ८०० मिनेट कम्पनीको नेटवर्क भित्र र ७५ मिनेट अन्य नेटवर्कहरुमा कल गर्न र ८ जीबी डाटा भोल्युम र ५०० वटा एसएमएस गर्न सकिने सुबिधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।